Antsiranana, 08.03.2021. Mialy R. Rajoelina sy ny honko - Le blog de fitia-madagascar.over-blog.net
<< Mialy R. Rajoelina intervention... Madagasikara Herisetra. Sahia... >>
10 mars 2021 3 10 /03 /mars /2021 17:08
Antsiranana, 08 Marsa 2021 maraina, Andro Iraisampirenena ho an'ny Zon'ny Vehivavy. Nialohan’ny nanaovana ny fambolena honko eo amin’ny Baie des Français, plage Marofady, eo ampitan’ny Nosy Lonjo (« Pain de sucre »), dia nanao kabary kely Ramatoa Mialy R. Rajolina, Vadin’ny Filoham-pirenena, sy Ramatoa Bavy Angelica M., Minisitry ny Mponina sy ny Fiahiana ara-sosialy ary ny Fampiroboroboana ny Vehivavy. Noraketinay ato amin’ny madagate an-tsoratra ho lovainjafy.
« Ramatoa Filohan’ny Antenimierampirenena,
Ramatoa Vadin’ny Praiminisitra,
Ramatoa isany Mpikambana eo anivon’ny Governemanta,
Ianareo Vadina Minisitra,
Ramatoa isany Solombavambahoaka,
Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations internationales à Madagascar,
Ramatoa Vadin’ny Governoran’ny Faritra Diana,
Ianareo Manampahefana isan-tsokajiny,
Tompokolahy sy Tompokovavy.
An-karavoana tanteraka no iarahabako antsika vehivavy rehetra tratrin’izao Andro lehibe ho fankalazana ny Andro Iraisam-pirenena ho an’ny Vehivavy izao. Isaorako ianao Ramatoa Minisitry ny Mponina sy ny Fiahiana ara-sosialy ary ny Fampiroboroboana ny Vehivavy tamin’ny fandraisam-pitenenanao teo.
Misaotra anao sy ireo mpiara-miasa aminao ihany koa, Ramatoa Minisitra, tamin’ny fiarahana nihisalahy tamin’ny fikarakarana izao fankalazana izao 8 Marsa izao.
Iarahantsika mahafatantatra loatra fa ny vehivavy dia manan-jo tokoa. Kanefa hita eny anivon’ny fiaraha-monina fa mbola misy ny tsy fitoviana. Ka izany indrindra no mahatonga ahy manohana hatrany ny vehivavy amin’ny asa ataony an-davanandro mba hananany fahavitan-tena, na eo anivon’ny tokan-trano, na eo anivon’ny fiaraha-monina.
Raha namboly bararata sy rofia isika omaly, dia hiaraka hamboly honko « mangrove » androany.
Ny « mangrove » dia hafahan’ny drakaka sy ny makamba mivelona sy mitombo isa, ary izy ireo dia anisan’ny foto-pivelomana ho antsika vehivavy eto Antsiranana.
Manadio ny tontolo iainana koa ny « mangrove », amin’ny alalalan’ny fisintomany ny « carbone ».
Araka ny fanta-tsika, ho fisoroana ny fiparitahan’ny valan’aretina coronavirus, dia isaky ny Renivohi-paritany no nankalazana ny 8 marsa ary eto Antsiranana no voatondro ho ivon’izany.
Koa nosafidianako manokana ny hitondra ny lahateniko ho an’ny Malagasy rehetra, amin’ny alalan’ny radio sy ny televiziona nasionaly (ETO). Koa manasa am-pitiavana antsika rehetra hanaraka izany.
Mankasitraka indrindra, ary manasa anareo avy hiroso amin’ny fambolena ireto honko ireto./ ».
F’inona moa ny vontoatin’ny kabarin’i Ramatoa Bavy Angelica M., Minisitry ny Mponina sy ny Fiahiana ara-sosialy ary ny Fampiroboroboana ny Vehivavy izany ? Ireto izany nambarany izany :
« (…) Raha ny Tantara dia efa tamin’ny fiandohan’ny taon-jato faha-XX no niady mafy ireo vehivavy nianona ny zo hiasa, hahazo karama mitovy ny amin’ny lehilahy, ho afaka hiteraka an-kalalahana, ary indrindra ho afaka mba andeha hifidy. Nandresy ireo zokin-tsika rahavavy ireo, ka izany fandresena izany no ankalazain-tsika isan-taona maneran-tany, isaky ny 8 marsa.
Efa azon-tsika ny zon-tsika rahavavy namana, fa ny fitakiana ny fampiaràna no ho ataon-tsika amin’ny alàlan’ny fandraisana andraikitra. Izany indrindra no ahatongavan-tsika androany, fa ny vevhivavy mizaka tena sy miarin-doha ao anatin’ny tontolo iainana mirindra no antoky ny fampandrosoana lovainjafy.
Fanta-tsika ary iainan-tsika tokoa. Tato ho ato dia misy ny olana miseho noho ny fiovan’ny toe-trandro, sy ny fasimban’ny tontolo iainana. Ka noho izany, miakatra ny afanana, tsy misy ny orana, tsy misy ny rano sotroina, maina ny tany, tsy misy ny vokatra. Ao ihany koa ny aretina covid-19 izay mamparefo ara-pahasalamana sy ara-toe-karena ka mampitombo ny fahantrana misy amintsika.
Ny zaza amam-behivavy no tena iaran’izany rehetra izany ka mahatonga azy ireo mifindra monina, ny any amin’ny faritra Atsimo. Izay no antony andraisan-tsika andraikitra amin’ny androany, amin’ny fanaovana izao fambolena honko na « mangrove » mba hanatsara ny tontolo iainan-tsika ka apetran-tsika ho lovainjafy.
Ataon-tsika izao mba anampiana ireo rahavavin-tsika, ireo mpanjono izay mitrandraka ity toerana ho fiveloman’ny ankohonany. Ka ao anatin’izany dia ho afaka hizaka-tena ara-toe-karena, tsy miankin-doha fa ho vehivavy mandray andraikitra sy mitovy lenta amin’ny fandraisana adidy an-tokan-trano izy ireo.
Ny Ministeran’ny mponina izay miahy ny Fampivoarana ny Vehivavy dia misaotra sy mankasitraka anareo rehetra fikambanam-behivavy, manam-pahefana sy tomonandraikitra isan-tsokajiny (…) ».
Nandika ny kabary an-tsoratra : Jeannot Ramambazafy
Naka vidéo sy ny sary : Andry Rakotonirainy
Antsiranana, 08.03.2021. Ramatoa Mialy R. Rajoelina sy ny honko
Nialohan'ny nanaovana ny fambolena honko eo amin'ny Baie des Français, plage Marofady, eo ampitan'ny Nosy Lonjo (" Pain de sucre "), dia nanao kabary kely Ramatoa Mialy R. Rajolina, Vadin'ny ...